प्राविधिक कठिनाइ, कृपया खडा हुनुहोस् | Martech Zone
प्राविधिक कठिनाइ, कृपया खडा हुनुहोस्
शनिबार, डिसेम्बर 30, 2006 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
अन्तिम दुई दुई रात मैले केही घण्टा निद्रा प्राप्त गरिसक्यो किनकि मलाई कम्पनीमा वर्डप्रेसको लागि नयाँ विषयवस्तु निर्माण गर्दै वर्डप्रेस, पीएचपी, प्लगइनहरू र जाभास्क्रिप्टमा राखिएको छ र त्यसपछि मेरो अभिलेखहरू पुनः प्राप्त गर्न कोसिस गर्दैछु। म अर्को कम्पनीलाई नयाँ अनलाईन म्यासअप सुरू गर्न पनि मद्दत गर्दैछु (मैले भर्खरै केहि ग्राफिक्स गरेँ, उसले एकदम राम्रो म्याशअप गर्यो जुन तपाईंले सुन्नुहुनेछ धेरै नै छिट्टै!)
मेरो संग्रह पृष्ठको सम्बन्धमा, स्पष्ट रूपमा मैले मेरो विषयवस्तुलाई यति टाढा परिमार्जन गरेको छु कि अब यो मूल रूपमा डिजाइन गरिएको जस्तो कार्य गरिरहेको छैन। स्क्वाइबल बेटा विषयवस्तु। मलाई थाहा छैन मैले यो कहिले गरें, तर यो अहिले केहि हप्ताहरूमा घट्दै छ। (Psst ... हे स्क्वाइबल मान्छेहरू ... कृपया केहि चाँडै सुरुवात गर्नुहोस् ... तपाईं सधैंभरि बीटा हुनुभयो!)
मैले अभिलेखहरूको लागि WordPress प्लगइनहरूको अधिकता प्रयास गरेँ। तिनीहरू मध्ये केही राम्रा मनमोहक थिए, जस्तो सिमिल टाइमलाइन प्लगइन। मसँग यो थियो र हिजो राती चलिरहेको छु तर यसले यो पत्ता लगायो कि यसले एक घातक झलकमा सबै पोस्टहरू लोड गर्यो। अर्ग।
मसँग यस साइटमा 300०० भन्दा बढी पोष्टहरू छन् जसले भ्रमण गरेको प्रत्येक व्यक्तिको लागि राक्षस फाइल अनुरोध निर्माण गर्दछ। मैले कोडि mod परिवर्तन गरें क्यास मेकानिजम बनाउनका लागि। त्यसले सबै डाटाबेस हिटहरूलाई हटायो तर प्रत्येक ग्राहकका लागि लोड गर्न यसलाई धेरै संभालिएको थियो। आदर्श रूपमा, प्लगइनले यसको प्रयोग गरी मेकानिजमको उपयोग गर्नुपर्दछ सिमिल एपीआई समय सारियो को रूप मा घटनाहरु पुन: प्राप्त गर्न जान। म त्यो प्रतीक्षा गर्छु!
सिमिल टाइमलाइन प्लगइन र अन्य धेरै प्लगइनहरूका साथ अन्य मुद्दा मैले फेला पारे कि घटनाहरू गतिशील रूपमा जाभास्क्रिप्ट / एजेक्स प्रयोग गरेर लोड गरिएको थियो। यो तपाईंको ब्लगको लागि स building्ग्रह निर्माण गर्ने डरलाग्दो तरिका हो किनभने खोज इञ्जिन क्रोलरहरूले एक डेड-अन्तमा ठक्कर दिन्छ।
नतिजाको रूपमा, मलाई लाग्छ कि म आफ्नै निर्माण गर्न लागिरहेको छु। मँ केहि विचारहरुका साथ जाँदैछु कसरी अहिले ... सम्भवत: राम्रो रूखको प्रकार कार्य एक बर्ष, महिना देखि, पोष्ट गर्न। हामी विचार गर्ने छौँ। म अर्को हप्ताको अर्को प्रोजेक्टको लागि विषयवस्तुको धेरै काम गर्दैछु त्यसैले म यसमा फर्कनेछु।
यसै बीच, मेरो साइटमा हिटहरू अभाव हुन सक्छ किनकि अभिलेखहरू क्रल भइरहेको छैन। हामी ती हिटहरू फिर्ता पाउनेछौं, यद्यपि! एकछिन रोकिनुहोस्।
म आइरन म्यान हुँ!
नयाँ सालको शुभकामना ... शायद
जनवरी 1, 2007 5:51 बजे
मैले वास्तवमा त्यो पनि स्थापना गरें। म केहि प्राप्त गर्न कोशिस गर्दैछु जुन अलि बढी व्यापक छ ... एक नजर लिनुहोस् http://binarybonsai.com/archives/
उसले राम्रो कार्यान्वयन गरेको छ र आफ्नो डाटा लुकाउन र प्रदर्शन गर्न css र जाभास्क्रिप्ट प्रयोग गर्दछ। यो सबै वास्तवमा HTML मा उपस्थित छ त्यसैले यसलाई क्रल गरिनेछ।
यो धेरै राम्रो छ।